यी आमाका पाँचभाइ छोरा कहाँ होलान् ? – NepalAustralianews.com
April 18, 2015 April 18, 2015 समाज
झन्डै ६० नाघेकी आमा । जो जोरपाटी चोकैको फुटपाथमा छिन् । झट्ट हेर्दा तराई मूलकी जस्ती लाग्छिन् ।
सोधियो, ‘आमा, घर कहाँ हो ? कहाँबाट यहाँ आउनुभयो ?’
तर, उनले नेपाली भाषा बुझिनन् ।
उनी स्पष्ट नबुझिने भाषामा बर्बराउँथिन् । उनको भाषा बुझ्न कठिन हुन्छ । र, तराई मूलका दाजुभाइलाई बोलाएर सोध्न लगाइयो । फेरि पनि उनको भाषा स्पष्ट बुझ्न सकिएन । उनलाई बोलाउन भने सकियो ।
सांकेतिक र हिन्दी भाषामा यस्तै सोधियो, ‘छोरा कति छन्, घर कहाँ हो र यहाँ कसले ल्यायो ?’
उनले घर बिहार भएको शब्दमा भनिन् । छोरा पाँचजना भएको एउटा हातको पन्जाले संकेत गरिन् । र, कुनै छोराले ल्याएर यहाँ छाडेको पनि बुझियो ।
काठमान्डुमा यस्ता असहाय वृद्धवृद्धा, बालबालिका सडकमा बेवारिसे देखिनु कुनै नौलो होइन । तर, यी आमा भने कसैले ल्याएर छोडेजस्तो देखिन्थ्यो । किनभने, यिनले नेपाली स्पष्ट बुझ्दिनथिइन् ।
आखिर यी आमा कहाँबाट आइन् त ? यो पंक्तिकारलाई चासो बढ्न थाल्यो । जोरपाटी चोक, जहाँ यो पंक्तिकार दिनहुँजसो कतै आउँदा–जाँदा बस चढ्ने र ओर्लने गर्छ ।
मंसिरको अन्तिम साता, साँझको ७ बजेको हुँदो हो । चोकैको फुटपाथमा एउटी वृद्धा बर्को ओढेर बसिरहेकी थिइन् । झट्ट हेर्दा तराई मूलकी र ६० नाघेजस्तै देखिन्थिन् ।
उनको आवाज पनि लरबराएको छ । लाग्छ, यिनी यो ठाउँमा बिल्कुल नयाँ हुन् । पंक्तिकारले उनको तस्बिर खिचेर फेसबुकमा अपलोड गर्यो । केही सहयोगी हात अगाडि आए । जसमा काठमाडौं निवासी तुलसा राई थिइन् । उनले फेसबुकमा म्यासेज पठाएर सहयोग गर्ने वाचा गरिन् । उनले घरमा लगेर पाल्न चाहन्थिन् ।
तर, यसो गर्न कुनै आधिकारिक संस्था चाहिन्थ्यो । त्यसै घरमा लैजान मिल्दैनथ्यो । त्यसैले तुलसाले केही दिनका लागि खाना र न्यानो कपडाको व्यवस्था गरिदिइन् ।
त्यसपछि पवित्र सामाजिक सेवा नेपालकी अध्यक्ष दीक्षा चापागाईंलाई यी वृद्धाबारे जानकारी गराइयो । दीक्षाले उनलाई जिम्मा लिइन् । दीक्षाले लगेपछि उनको रूप नै फेरियो । तर, माघको दोस्रो सातामै यी आमा हराइन् । तर फेरि पुरानै ठाउँमा देखिइन् ।
अन्य यस्ता असहायले त ठाउँ बदलिरहन्छन् । तर, यी आमाले किन यही ठाउँ रोज्छिन्— जोरपाटी चोक ?
यो पंक्तिकार र केही साथीहरुले उनलाई कहिलेकाहीँ केही खाना लगिदिन्छौँ । हामीले उनका तस्बिर पनि खिच्यौँ । आज मातातीर्थ औँशी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन हो । हामीले यो पर्वबारे सामाजिक सञ्जालहरुमा हल्ला गरिरहँदा यस्ता कैयौँ आमाहरु सडकमा बेसहारा जीवन बिताइरहेका छन् ।
आज यी आमासँग कुनै देशको नागरिकता छैन । यी आमा नेपाली नागरिक हुन् वा भारतीय ? हामीले मुख हेर्ने पर्व मनाइरहँदा यी आमाका सन्तान के गरिरहेका होलान् ?
यी आमाले भनेजस्तै यिनका पाँचभाइ छोरा छन् भने, के यो खबर ती सन्तानसम्म पुग्ला ? र, ती सन्तानले यी तस्बिर हेरेर आफ्नी आमालाई चिन्लान् ? आशा गरौँ, यो खबर यी आमाका सन्तानसम्म पुगोस् ।
– See more at: http://www.ratopati.com/2015/04/18/227330.html#sthash.U2SlzjIl.dpuf
छोरी नपढाउने तर धेरै पढेकी बुहारी खोज्ने?: मोदी